Izindaba Zamasheya | Ezezimali Ezezimali (Ikhasi 2)
Iphrofayili ngayinye yokutshalwa kwemali inokwelashwa okuhlukile ukuhambisa utshalomali lwayo futhi yenze ukonga kube nenzuzo ebangeni eliphakeme lokulamula.
Imakethe yamasheya yase-US izophela unyaka cishe ezindaweni eziphakeme
Izimali e-United States zisebenza kahle kakhulu kulo nyaka, osuzophela.
Kungani imakethe yamasheya ikhuphuka lapho ibhekene nenkinga yezomnotho?
Enye yezinto edonsa amehlo kubatshalizimali iqiniso lokuthi imakethe yamasheya iyakhula ngenxa yenkinga yezomnotho.
I-Red Eléctrica ku-radar yokuthenga okuzayo
Esinye sezikhuthazo zokuvula izikhundla eRed Eléctrica kungenxa yokuthi ingenye yezinkampani ze-Ibex 35 ezinenzuzo ephezulu kakhulu.
Ingabe sekuyisikhathi sokungena ezikhundleni ze-Enagás?
I-Enagás ibingenye yezimali zaseSpain ezazise kakhulu ezinyangeni eziyishumi nambili ezedlule.
Abeluleki beRobo: kuyini?
Sikutshela konke mayelana nabeluleki beRobo, kuyini futhi yini izinzuzo zayo njengokutshalwa kwemali kwesikhathi esizayo? Thola izinzuzo zayo nokuthi ungazisebenzisa kanjani.
I-Ibex 35 isalele emuva ngaphakathi kwezinkomba zaseYurophu
Inkomba ekhethiwe yezimali zaseSpain, i-Ibex 35, ingomunye wabadlali abenze kabi kakhulu kulo nyaka, osekuzophela.
Ikusasa lesitoko sokuhweba
Ikusasa ezimakethe zezimali lenziwa esivumelwaneni esibophezela labo abanesivumelwano ukuthi bathenge noma bathengise.
Amanani womkhakha kagesi waseSpain
Umkhakha kagesi ubonakala ngoba wonke amalungu awo akhonjwe kahle futhi ahlanganisiwe ngaphakathi kwe-Ibex 35.
Imikhakha yangempela yokutshala imali: irayisi, iwayini noma uwoyela
Kunemikhakha yasekuqaleni okufanele utshale kuyo, njengelayisi, iwayini noma uwoyela, okuyindlela ongayithola ezimakethe zezimali.
Ukusuka ekubeni ngomunye wamatshe ayigugu esigqokweni kungabi yinto yalutho emakethe yamasheya, lokhu ukubuyekeza kuka-Abengoa kwezimakethe zezimali eminyakeni yamuva
Umhlangano kaKhisimusi uvame ukusetshenziswa ngabatshalizimali abancane nabaphakathi ukwenza imiphumela yabo yonyaka.
Amasu amancane wokuthuthukisa ukuthengiswa kwemakethe yamasheya
Enye yezinhloso zanoma yimuphi umtshalizimali omncane naphakathi ukwenza ngcono amanani entengo yokusebenza emakethe yamasheya.
Ezinye izindlela zesikhwama zamaphrofayli amaningi okuzivikela
Esinye seziphakamiso ezinhle kakhulu zabatshalizimali abavikelayo kungaba yimali ehlanganisa ukulingana nezinye izimpahla zezezimali.
Ungathengisa kanjani ukunyakaza kwe-bearish emakethe yamasheya?
Esinye sezihluthulelo zempumelelo yokusebenza okwenziwe ngokunyakaza kwe-bearish ukuthi ziqondiswe ezikhathini ezimfushane kakhulu zokuba unomphela.
Ngabe iselula engaphezulu ingaba enye esikhundleni seTelefonica?
Omunye wemibuzo abatshalizimali abaningi abawubuzayo njengamanje ukuthi ngabe kungcono yini ukutshala imali eMás Móvil noma eTelefonica.
Njengoba sibhekene nesimo sokuwohloka komnotho emhlabeni jikelele, kuyiqiniso ukuthi kuyamangaza ukuthi izimakethe zezimali zezimali azikaze zikwenze lokho.
Ungazuza kanjani ngokuhweba oku-inthanethi emakethe yamasheya?
Abatshalizimali abakhetha ukwenza imisebenzi yabo ngefomethi eku-inthanethi, okusho ukuthi nge-Intanethi, bangazuza ezinzuzweni ezenziwa lokhu.Abatshalizimali abakhetha ukwenza imisebenzi yabo ngefomethi eku-inthanethi, okusho ukuthi nge-Intanethi, uzuze ezinzuzweni ezikhiqizwe yilesi siteshi sokumaketha esibaluleke
Kulula kuwe ukukhomba amanani ayingozi kakhulu emholweni oguquguqukayo ukuze ungavuli izikhundla kuwo futhi ngale ndlela ugweme ukuvezwa kwawo.
Ungayonga kanjani imali ekuhwebeni ngamasheya?
Icebo elincane ongalisebenzisa manje ukonga imali kwizimali zakho siqu ukulinda isikhathi eside ukuthengisa amasheya.
Zingathengwa ngasiphi isikhathi sonyaka emakethe yamasheya?
Ukukhetha isikhathi sonyaka sokutshala imali emakethe yamasheya kungenye yezinto okufanele sizibekele zona ukuze senze imisebenzi enenzuzo ezimakethe zamasheya ngeziqinisekiso ezinkulu zempumelelo.
Ukuthengiswa kwe-inditex kuyakhula: ingabe isikhathi sokuthenga?
Okunye kwamandla e-Inditex ukuthi kunconywa kakhulu ngabahlaziyi bezezimali kwiphothifoliyo yokutshala imali ngonyaka ozayo.
I-Eurona isesimweni esibucayi
Uma kukhona ukuphepha okudumaze bonke abatshalizimali abancane nabaphakathi, bekungekho okunye ngaphandle kwe-Eurona futhi okwamanje okuhweba ngama-0,30 euros.
Ungasebenza kanjani lapho uphikiswa?
Ukumelana emakethe yamasheya kungenye yezingcezu ezibalulekile ekuhlaziyweni kwezobuchwepheshe futhi uma wazi ukuthi ungasebenza kanjani ungazuza impumelelo eminingi ekusebenzeni.
Eyesibili yezinkomba zikazwelonke, i-Ibex 35 Inverso, inesibopho sokuphindaphinda ukunyakaza kwansuku zonke kwe-Ibex 35, kepha kolunye uhlangothi.
Izindawo ezithinteke kakhulu ngokuqothuka kukaThomas Cook futhi okuhlasele ezokuvakasha zaseSpain emakethe yamasheya yizona ziqhingi: iziQhingi zeBalearic kanye neCanary Islands.
Yiliphi isu elizosungulwa namabhange?
Uma kukhona umkhakha obuthakathaka kakhulu okwamanje, lokho akekho omunye ngaphandle komkhakha wamabhange. Kusemazingeni aphansi eminyakeni yamuva nje kanti ngamanani Enele ukukhumbula ukuthi maqondana nezindinganiso zomkhakha wamabhange ku-stock index ekhethiwe, i-Ibex 35, ingxenye enhle yabamele bayo iyinani lentengo ku maqondana nesilinganiso esivela eminyakeni embalwa edlule
Imikhakha engcono kakhulu yokutshala imali ngemuva kokubuya eholidini
Ibhange lotshalomali laseMelika uMorgan Stanley selibuyekeze izilinganiso zalo zamabhange aseSpain ngemuva kwe-European Central Bank (ECB) Akungabazeki ukuthi uma izimakethe zamasheya zikhuphuka kule ngxenye yokugcina yonyaka, omunye wemikhakha yemakethe yamasheya ezodonsa izinkomba eziyinhloko ukwakhiwa
5 amanani athuthukise isici sawo sobuchwepheshe ezinsukwini zamuva
Izinkampani zomshuwalense ngamanye amanani we-Ibex 35 angathatha indiza kancane kancane ngenxa yokuthuthuka kwayo emkhakheni wezobuchwepheshe.
I-Acerinox exhunyaniswe nemijikelezo yezomnotho
Elinye lamagugu we-equity equity index, i-Ibex 35, eyehlise kakhulu inani eminyakeni yamuva kube yinkampani yensimbi i-Acerinox.